Manchester United oo wadahadalo heshiis kordhin ah kula jirta Eric Bailly.
Home Horyaalka Ingiriiska Manchester United oo wadahadalo heshiis kordhin ah kula jirta Eric Bailly.
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay wadahadal qandaraas kordhin ah kula jirto daafaca dhexe Eric Bailly .
26 jirkaan ayaa mar kale la dhibtoonayay dhibaatooyin badan oo taam ahaansho intii lagu jiray ololihii 2020-21, kaliya 13 kulan ayuu saftay tartamada oo dhan, oo ay ku jiraan 7 kulan oo Premier League ah.
Bailly ayaa ciyaaray afar kulan oo isku xigta oo horyaalka ah intii u dhaxeysay 26-kii Disember ilaa 12-kii bishii Janaayo laakiin wuxuu kaliya hal kulan kasoo muuqday safka hore ee England tan iyo markaas, iyadoo Victor Lindelof inta badan laga doorbiday Harry Maguire .
Man United ayaa la filayaa inay u dhaqaaqdo daafac kale inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan, laakiin sida laga soo xigtay The Sun , kooxda ayaa wadahadal kula jirta ciyaaryahanka reer Ivory Coast heshiis cusub oo waqti dheer ah.
Qandaraaska Bailly ee Old Trafford ayaa dhacaya bartamaha 2022, waxaana warbixinta lagu sheegay in da ‘yarkii hore ee Espanyol la iibin karo hadii uusan saxiixin heshiis cusub ka hor xagaaga.
Daafaca ayaa ciyaaray 90-kii daqiiqo ee kulankii Man United ay bar-baraha 0/0 ah la gashay Real Sociedad lugtii 2-aad ee wareega 32-dhamaadka tartanka Europe League habeenimadii Khamiista.
Previous articleManchester City oo weli aaminsan inay hogaamineyso loolanka loogu jiro Lionel Messi’
Next articleMadaxda Liverpool oo shaki ka qaba mustaqbalka dheer ee Jurgen Klopp’